Soo Saarida Shahaadada PMP ee 2018 - Xusuus qorka, Talooyinka & Dib uhabeynta Imtixaanka PMP
Hel Shahaadadda PMP ee 2018 - Shahaadada Maaraynta Mashruuca
WAXYAABAHA LOOGU TALAGALAY DIIWAANGELINTA SHIRKA PMP ee 2018
Inaad ku sii wanaajisid xirfaddaada Mashruuca Maareynta Mihnadda wuxuu filanayaa inaad hesho waxyaabo kala duwan oo ku saabsan berrinka iyo baaritaanka dabka ee xarunta iyo goobaha waxbarasho si aad u qaadato cadeynta la rabo. Fursadda helitaanka Shahaadada Maaraynta Mashruuca ee 2018 waxay ku taal bartamaha ugu sarreysa ee qorshahaaga maalinta, halkan waa jumlad cad oo qaadaya qayb ka mid ah waxyaabaha isbeddelaya ee ku saabsan imtixaannada sannadka soo socda.
Waa in aan si fudud u bilowno nuts iyo bolts taas oo halkan ku saabsan qof walba waa inuu ogaadaa
Warbixin kooban oo ku saabsan PMP - qirashadeeda iyo codsigeedii ugu horeeyay waxay ku jirtey ganacsiga horumarinta, halkaas oo xirfadlayaasha loo qoondeeyey inay si ballaadhan u qabtaan iyo heshiis yar oo yar oo leh qaybo ka mid ah mashruuca ururka ayaa dareemay. Laga soo bilaabo markaa shuruudaha PMPs ayaa kordhay iyo maanta, dhammaan shirkadaha, oo ay ku jiraan aagga IT-ga, waxay ku tiirsan yihiin xirfadlayaashan si ay u maamulaan mashruuc si ay u fuliyaan wax ku ool ah. Shahaadada PMP waxaa ku qotoma Machadka Maareynta Mashruuca.
Buugga - PMI waxay soo saartaa tilmaame PMBOK ama Mashruuca Maareynta Mashruuca ee Aqoonta si ay ugu sahlanaato inay faham u noqoto shan xarumood oo dhexe - Bilowga, Qorsheynta, Hirgalinta, Korjoogteynta iyo Xakamaynta iyo Xiritaanka. Qaybaha guud ee guud waxay hoos u dhacaan aagagga barashada kuwaas oo tartamuhu fahmayaan heerka iyo maamulida waqtiga, kharashyada, isku darka mashruuca, qorshaha, tayada, hantida, waraaqaha, khatarta, iibsashada, iyo la-hawlgalayaasha.
Riix Halkan si aad u soo dejiso Hagaha Waxbarashada PMP
Imtixaanka - Imtixaanka la xiray maalmaha doorashada sanadka ee PMP balan qaadey, imtixaanka Prometric wuxuu diiradda saarayaa. Waxay rajeynayaan inay u baahdaan inay muujiyaan imtixaannada internetka kuwaas oo tijaabiya fahamkooda xuduudaha waxbarashada 10. Baadhitaanku wuxuu ku faafaa wax ka badan 200 weydiimaha kuwaas oo tijaabiya kartida maskaxda, waxtarka dabiiciga ah ee dabiiciga ah si loo kormeero sida dhabta ah.
Waxaad sidoo kale hubin kartaa: Machadka Tababarka Shahaadada PMP ee Gurgaon
PMI oo ujeedadiisu tahay in la ilaaliyo shahaadada khusaysa iyo habdhaqankeeda kor iyo hoosba, PMPBOK iyo tusaale imtixaanka ayaa muujinaya dhaqamada hadda. Waxaa jira walaac ku saabsan horukaca, imtixaanka lagu xirayo 26th March, 2018 iyo ka dib. Haddii ay dhacdo in aad tixgelisid sida ay tahay ururkii hore, waa mid caqli gal ah in lagu muujiyo imtixaanada PMP ka hor taariikhda kor ku xusan. Noqo sida ugu suurtagalka ah, mar haddii aad maqan tahay taariikhda la filayay, halkan mar waxaa ku soo gala imtixaanka imtixaanka imtixaanka PMP.
U qalmida PMP - Ma jirin wax isbedel ah oo lagu sameeyay shahaadada aqoonsiga PMP ee tartamayaasha raadinaya aqoonsiga. Waxay ku xiran tahay barista iyo ka qaybgalka berrinka. Marka aad haysato shahaadada bachelor-ka (afar sano ama isku mid ah), markaa waayo-aragnimada loo baahan yahay waa saacadaha 4500 ee shaqada wadista wadista iyo isuduwidda. Marka aad fursad u haysato inaad qalinjabiso, ha ka niyad jabin, shahaadada dugsiga sare ama shahaadada ikhtiyaariga ah waxay kaa filaysaa inaad haysato saacadaha 7500 ee wadista wadista iyo isuduwidda mashaariicda. Labaduba waxay u baahan yihiin barashada maareynta mashruuca oo aan ka yarayn saacadaha 35, oo ay hubiso hay'ad la aaminsan yahay in ay tahay PMI.
Codsiga - Nidaamka ayaa ku sii jiri doona 2018. Waxaad u baahan tahay inaad buuxiso qaabka arjiga ee goobta PMI. Xaqiijinta barashada, iyo weliba marka la soo bandhigo, waxaa sameeya internetka ururka.
PMBOK - PMI ayaa ka baxday 6th sii daayay PMBOK. Isbedelada aasaasiga ah ee buugga iyo imtixaanka ayaa ah goobtan:
- Ku dar qayb ka mid ah dareenka qaybta hoggaamiyaha mashruuca. Awoodaha, dabeecadaha, iyo waayo-aragnimada waxay dhammaantood soo saari doonaan si ay u fahmaan su'aalaha ku tiirsan gobolkaan.
- Isbeddelka magaca laba gobol oo waxbarasho
Maareynta wakhtiga hadda waxaa lagu dhajin doonaa maaraynta jadwalka
Maaraynta Khayraadka Bani'aadamnimada ayaa hadda lagu dhajin doonaa Maaraynta Khayraadka
Afar meel oo cusub ayaa lagu daray gobol kasta oo macluumaad ah, gaar ahaan:
Tusaalooyinka iyo dhaqanka sii kordhaya
Falanqaynta jawiga Agile iyo Adaptive Environment
Qorsheynta imtixaanka - Qoraalka daraasadda iyo tusaalooyinka ayaa sii soconaya sidii hore, inkasta oo ay tahay mid cusub oo lagu magacaabo PMBOK. Waxaad samayn kartaa koorsada PMP naftaada, kana faa'iideysii goobta PMI iyo imtixaan online ah si aad u dhameysatid saacadahaaga 35. Beddelka kale waa inuu ku biiro barnaamij diyaarinta kaas oo kaa caawin doona Hagaha Horumarinta Xirfadaha ama PDUs. Tababarayaal khibrad leh ayaa halkaa joogi doona si aad u fahamto PMBOK, fikradaha xarumaha dhexe iyo faham qoto dheer oo ku saabsan aagaga xogta. Waxyaabaha la xasuusto inta aad qorsheynaysid imtixaanka -
Raadi caawimaad haddii aad u baahatid shakhsi ahaan iyo waji dhib leh oo leh khibrad la adeegsado. PMPs gudaha ururradaada ama ururinta online-ka ah ayaa caawinaya waa habab aad u adag si ay u helaan xalalka su'aalaha.
Haddii ay dhacdo in aad ku biirtay dhismo, ha ku qasbin in aad sameysid su'aalo, xitaa kuwa la yaabka leh. Shahaadooyinka PMP waxay kuugu kacaan wakhti, lacag caddaan ah iyo jimicsi loogu talagalay nidaamka - wax hubaal ah waa in la nadiifiyaa.
Waqti u samee jadwal maalmeedkaaga si aad uga fikirto PMBOK
Edbinta feejignaanta leh waxay keenaysaa natiijooyin rajo leh, markaa ha siiyaan tijaabooyinka jajaban, tirada ugu badan ee aad awooddo
Ugu dambeyntii, hubi oo ku faraxsan inta aad imtixaanka siineyso. Fahamku wuxuu si deg deg ah u dhajin doonaa
Dammaanaddaada maskaxdaada iyo jidhkaaga waa la qaboojiyay ka hor imtixaanka si loo sameeyo sidoo kale waxaa laga yaabaa in la filayo.
Imtixaanka PMP - Muddo shan iyo toban daqiiqo ah ayaa la bixiyaa si loo qiimeeyo waraaqda, kadibna waxaad heli doontaa afar saacadood si aad u dhameysatid weydiimaha 200. Inta badan rajo-qabayaashu waxay baaritaan ku samayn karaan wargeyska shan daqiiqo ka dibna isticmaali karaan inta ka dhiman daqiiqadaha 10 si ay u sameeyaan qoraallo ku qoran xaashi warqad ah si loo caawiyo tirinta. Noqo sidii ay u dhici lahayd, ka hor intaan tababarka la dhimi doono. Noqo sidaad u maleyn lahayd, ka hortaga qoraalka qoraalka ama 'daadinta maskaxda' sida loogu yeero waa la ogol yahay inta ay socoto afarta saacadood ee kale. Maadaama meydka PMP aysan si xun u dhigin jawaabta khaldan, waxaad u baahantahay inaadan walwal gelin markaad hesho xal aad udub-dhexaad ah.
Natiijada - Kuwa qaadanaya imtixaanka warqadda ku saleysan waxay heli doonaan natiijooyinkooda afar maalmood gudahood halka natiijada baaritaanka internetka lagu dhawaaqo laba qaybood oo kala duwan. Waxaad heli doontaa mid ka mid ah saddexda heer:
Horey u Yaqaan
Hoos ku Daran
Ka hortag nolosha nolol maalmeedka kadib Shahaadada PMP - Waxaa laga yaabaa inaad hesho dhammaan albaabada aadka u adag ee furan marka caddayntu ay la socoto horumarka shaqada iyo miisaannada mushaharka ee fiican. Adiga oo ah hogaamiye wadista mashruuc, ma kordhin kartid qiimaha ururkiinna oo leh macluumaadkaaga casriga ah, waxaad u fiicnaan doontaa inaad kormeerto jadwalka iyo hantida.
Dib-u-Shahaadada PMP - Markaad heshay Shahaadada PMP, waqtiyada joogtada ah waa inaad heshaa 60 PDUs, si loo buuxiyo shahaadada.
Ugu dambeyntii, iyadoon loo eegin haddii aad go'aansanaysid imtixaanka iminka ama ka dib 26th Maarso, 2018, waxaa jira hal shey oo aad ku qasban tahay inaad cadeyso Shahaadada Maareynta Mashruuca waa wax kasta oo ay adag tahay in la gaaro, ilaa inta aad maalgashanayso riixid si aad wax u barato .